Iyo Mimhanzi Haimbomira muNew Orleans, kunyangwe panguva yeHurricane Ida ine simba rakakura
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Iyo Mimhanzi Haimbomira muNew Orleans, kunyangwe panguva yeHurricane Ida ine simba rakakura
Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Mutungamiri weUS Biden kuFEMA
Chikamu 4 Hurricane Ida's 120-150 mph mhepo uye 'njodzi' kuputika kwedenga remba kubva pazvivakwa, kuita Rwizi rweMississippi kuyerera neshure uye shongwe dzakakwira kusimuka. Dutu parizvino rakasiya vanhu vangangosvika miriyoni vasina magetsi.
Dutu reIda rakasiya New Orleans yese isina simba nekuda kwe "njodzi yekuparadzira hutachiona," sekureva kwaEnggy New New Orleans.
Nyika yeUS State yeMississippi inoshuma magetsi epasi rese
Vatengi vemagetsi vanogona kunge vasina simba kwemavhiki anotevera.
Minyengetero kumusoro New Orleans. Zvakafanana naKatrina kwese kwese meseji inowanikwa pa Twitter.
Louisiane inoda minamato. Iine iyo yakaderera COVID-19 majekiseni ekudzivirira, ino US State ine vanhu rekodhi muzvipatara uye nemhepo. Hurricane Ida yatova dutu hombe uye rinoparadza kana richienzaniswa neHurricane Katrina iyo yakauraya vanhu 1833 muna 2005.
Yakatsamwa tweet inoti:
Anti-vaxxers + anti-maskers vanozviuraya ivo nevamwe @[email inodzivirirwa] ndiani anoisa mabasa kutanga auraya ppl. Zvipatara zvizere (covid) panguva Dutue Ida humbowo hwezvinoitika kana vatungamiriri vezvematongerwo enyika vakundikana muzviito (vhota HERE kune zvese)
Zvipatara zviri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva zviri kushomeka pa oxygen, nenzvimbo dzakanyanya kurohwa (seLouisiana) dzasara nemaawa gumi nemaviri kusvika makumi maviri nemana. Kana Dutu Ida rikavhiringidza cheni yekutengesa zvachose, mhedzisiro yacho inogona kuve njodzi.
ZANO: Vanhu muLouisiana nedzimwe nyika vanogona kunge vachirasikirwa nesimba nekuda kwe Hurricane Ida, zadza bhavhu rako nemvura. Shandisa mvura iyi kuzadza matangi ako etoilet kuitira kuti ugone kushandisa zvimbuzi zvako. Maguta akasununguka simba zvinoreva kuti pombi dzemvura hadzishande saka hapana mvura.
- Yese yeOrleans Parish - rinova iro guta reNew Orleans - haina simba, sekureva kweNOLA Yakagadzirira, New Orleans 'emergency emergency campaign.
Kubuda kwacho kungangoitika nekuda kwenyaya huru dzekufambisa.
A tweet inoti: Ndanga ndichienda nekudzoka neina New Orleans migero. Iyo ABC imwe yanga ichiita zvirongwa zvenguva dzose kwemaawa mashoma apfuura. Hameno kuti vakagogodzwa here kubva mumhepo uye havakwanisi kukwira.
Chikamu 4 Dutu Ida rinorova Louisiana makore gumi nematanhatu mushure mekuparadzwa kweDutu Katrina; gavhuna John Bel Edwards vakati dutu iri rinogona kuve rakaipisisa muLouisiana kubva kuma16.
Zvivakwa zvepamusoro zvinokwidza, 911 mafoni haasisiri kupindura.
Mimhanzi zvakadaro haimbomira muNew Orleans. "Kwete kunyangwe" dutu rinochinja hupenyu "Phil Lavelle akatumira.
Mimhanzi haimbomira muNew Orleans. Kwete kunyange ye "hupenyu hunoshandura" dutu #HurricaneIda pic.twitter.com/wc3s8STIEq
TWEET: Kana iwe uchiziva nezve chero akavimbika uye akavhenekwa masangano ari akamira kuti ape rubatsiro kune avo vanokanganiswa Hurricane Ida ndokumbira undizivise kuti ndikwanise kupa. Ndinoyeuka Katrina. Ndinoyeuka kushaya hanya kwehurumende uye nevanhu vakatambura nekuda kwayo. Kwete zvakare.
Chirevo chenhau chinoti kune rugare kwazvo paBourbon Street muNew Orleans, zvese zvakasviba. Mvura nemhepo zviri kurova.
Y'all… Handitombozivi kuti iyi wizard chii asi inotyisa. #HurricaneIda
🎥 Scott Alexander muNew Orleans CBD pic.twitter.com/Yy51B2ECn3
Na8.00: 4 pm Hurricane Ida yakadzikiswa kubva kumusoro-kumagumo Chikamu 3 Hurricane kuenda kune yakaderera-chikamu Chikamu XNUMX Hurricane uye icharamba ichipera simba nehusiku. Migumisiro ichiri yakakura.
Mutungamiri weU.S. Biden akatumira tsamba kuti:
Kutenda nekushanda nesimba kwe @FEMA, isu takagara takagadzika zviwanikwa, zvishandiso, uye mapoka ekupindura kuti vapindure HurricaneIda. Izvi zvinosanganisira vanopfuura zviuru zviviri nemazana mana evashandi veFEMA, mamirioni ezvekudya uye marita emvura, majenareta, ekutsvaga uye ekununura zvikwata, uye pamusoro pezana maamburenzi.